Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan Spotify playlist
Abuur, Share, dhoofinta, Goobidda iyo Download playlist Spotify
Waayo, kuwa idinka mid ah oo ku cusub tahay Spotify agagaarka helitaanka qaadan kartaa waqti ka mid ah, in kasta oo Spotify ee user interface waa quruxsan fududahay in la isticmaalo. Laakiin sababta ay waqtigooda ku lumin sahaminta aad marka dhan waxaa ka mid ah halkan iyo hadda ka heli karaa? Sidaas oo aan wax oggolow sii ogolaanaysaa aad u bilowdo.
Qeybta 1: Samee Spotify playlist Qeybta 2: Share Spotify playlist Qeybta 3: Dhoofinta Spotify playlist Qeybta 4: Raadi Spotify playlist Qeybta 5: Download Spotify playlist Qeybta 6: dheeraad ah: Top toban playlist Spotify ee xisbiga Christmas + + + tababarka orodka
Qeybta 1: Samee Spotify playlist
Abuuritaanka playlist ah ayaa ah nin aan ka hawl yar. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa saxaafadda New playlist button iyo magacaabo liiska sida aad sida aad rabto.
Ka dib markii ay ku abuuray liiska aad xor u tahay inaad ku darto heeso badan intii aad rabto. Waxaad samayn kartaa in ay xaq u gujinaya song la doonayo, waxaad tagtaa dar iyo saxaafadda liiska aad rabto in aad gabaygan ku kaydiso.
Haddii kale waxaad samayn kartaa playlist a New si fudud xaq magcaabo, u tag dar iyo doorashada New playlist.
Qeybta 2: Share Spotify playlist
Wadaagista playlists yahay oo keliya sida ugu fudud ee iyaga la abuurayo, marka aad abuuray aad playlist oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa in wax miiran xaq mouse click on your playlist iyo saxaafadda Share.
p Ka dib markii in pop ah ilaa uu suuqa kala apear doonaa meesha aad ku siin kartaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan content aad playlists ee. Tani waa dabcan si buuxda optional
Marka aad ku dhameysatay kaalinta this proces playlists aad immeditly noqon doonaa arki karo in Spotify ee xogta saldhig la arki karo ee dhammaan dadka isticmaala. Ku haboon oo ku filan, Spotify automaticaly isticmaalaa shaqada farshaxanka ka albums, kuwaas oo heeso aad u isticmaashay sidaas darteed ma jiro wax loo baahan yahay si aad u samaysaan sanam caado u ah playlist ah.
Qeybta 3: Dhoofinta Spotify playlist
Dilalka ku filan, ma jiro wax feature (ugu yaraan ma mid xarrago leh) kuu oggolaanaysa in aad si toos ah u badbaadiyo playlists iyo sidoo kale wax kasta oo suurto gal ah oo ku saabsan qalab aad, in kiiska ka mid ah kuwa ula kac loo heli tirtirayaa. Waa in la filayaa in mustaqbalka dhow fursadaha gurmad la heli doonaa sidoo kale ay Spotify ee iyaga naftooda ama midkood ay ku dhiirigelinayaan in dhinac saddexaad. Waxaa hore u jiray qaar ka mid ah xal internet-ka, laakiin waxay sidoo kale uma shaqeeyaan sida aad jeclaan laheyd inaad ama ay sidoo kale u baahan yihiin cadad ah doqonimo ah software dheeraad ah si ay u shaqeeyaan, oo ma ay jiraan wax xarrago leh qaab kasta.
Our xal waa iska sahlan oo ka biyodiiday kaliya ee waa in aad u baahan doontaa in gurmad aad playlist mar nasta ama ugu yaraan sida ugu dhakhsaha badan ee aad wax isbedel ku sameeyo.
Spotify taageertaa jiita & dhibic doorasho halkan sidoo kale. Sidaas waxaad si fudud u soo jiidi kartaa playlists aad si aad desktop iyo in ay ku saabsan. Dabcan waxaad ku hayn kartaa hayaan aad folder qaar ka mid ah si aad si fudud u helaan.
Haddii ay fursad kasta oo aad ku nooshahay si aad u aragto playlist sabab uu tirtiray, waxaad click karaa si fudud double aad gurmad iyo heeso doonaa in la soo celiyo laakiin ma aad playlist sida mugga ah tan kaliya ee sida magacyada reer binu heesaha oo lagu badbaadiyey. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay in ay doortaan oo dhan kuwa songs (Ctrl saxaafadeed + A ee Spotify), jaraa'id click saxda ah ee aad mouse iyo abuuro playlist cusub oo magaca. Ilaa iyo inta aan ka heli karriin ka Spotify ama qaar ka mid ah app ka meel kale, waayo, wakhtigii ku wajahan, tani waa qaabka ugu wanaagsan ee aad gurmad playlists Spotify
Qeybta 4: Raadi playlist Spotify
Waxaa aa dhawr siyaalood oo loo raadiyo playlists in Spotify. Mid ka mid ah waa ay kaliya si fudud gelinaya tag la doonayo in beerta Search iyo Spotify si toos ah u heli doonaan wax kasta oo la xiriira arrintan, oo ay ku jiraan Playlists.
Habka kale waa in guji badhanka Browse ah, ka dibna riix on qaybaha iyo Xaalado tab ah kaas oo ku siin doonaa liiska oo ka mid ah tags ugu isticmaalay oo ku habboon oo ku saabsan noocyada kala duwan ee music.
Haddii aad ka heli Spotify goobidda iyo interface macna iyo discombobulating, aad si fudud u tagi kartaa http://www.listenspotify.com/ iyo waxaa isku dayi iyo raadinta. Tani waxay caddaynaysa in ay waxtar u leh dadka isticmaala desktop. Haddii ay jiraan wax ma aanan halkan jeclaan, iyo wax waa in la hagaajiyo, waa kari waayeen in ay baadhaan playlist ah loo isticmaalo ikhtiyaaraadka raadinta Qiimeynta oo aan ka jirto, laakiin waxaan rajeynayaa in this waa la hagaajin doona muddo waqti aad u gaaban.
Qeybta 5: Download Spotify playlist
Spotify bixisaa qadar u dhigma of music tayada internetka. Music waxaa had iyo jeer lagu soocaa playlists. Waxa aad weydiisan kartaa, ee ma suuroowdaa jid inaad kala soo baxdo ka playlists Spotify? Waxaad heli kartaa offline in playlist music ka helaan marka aad xubin ka mid ah lacagta caymiska Spotify ka noqoto. Ama haddii aad u maamulaan si download music Spotify si guul ah in hab qaar ka mid ah, waxaa laga yaabaa in xayiraad aad u ciyaaro sababtoo ah waa content DRM-ilaaliyo. Sidaas fiican aad ka heli lahaa, barnaamij awood badan u gee si ay u caawiyaan. Halkan waa choice- wanaagsan TunesGo . Waxay kaa caawin karaan download Spotify playlist lacag la'aan ah iyada oo lagu qoro. Waxaad sidoo kale ka ciyaari kara music ah playlist soo bixi xad la'aan. Ma sugi karo inaan arko sida ay u shaqayso? Aynu aad u bilowdo.
Halkan waa choice- kale oo wanaagsan Streaming taariikhqorihii Audio .
Si toos ah kala soo bixi Spotify playlist joogto ah
Download music Spotify in MP3 files
Sida loo soo bixi Spotify playlist
Tallaabada 1 Ku rakib playlist downloader Spotify ee
Download iyo rakibi barnaamijka on your computer. Ogsoonow in aad doorato mid ka mid sax ah sida ay your computer u gaar ah. Waxaan doonaa qaadan version daaqadaha sida tusaale ahaan ah.
Tallaabada 2 Download playlists Spotify
Fur barnaamijka dib markii la rakibey. Riix badhanka Record ee geeska bidixda ah ee kore. Markaas ordi Spotify oo heli playlist ah aad dooneyso in aad kala soo bixi. Marka music la ciyaaro, waxaad ka heli kartaa barnaamijka bilaabi doonaan in ay rikoor waqti isku mid ah. Play playlist oo dhan oo isku xigta iyo barnaamijka dillaaci kara laba songs markii aamusnaan dhexeeya. Waxa muhiimka ah waa in ay tahay in aad sii internet-sami ah socday.
Tallaabada 3 Play playlists Spotify on go ah
Ka dib markii playlists ayaa la bixi, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad muusiko ku go ka. Riix badhanka dar Lugood iyo waxaad ka heli kartaa heeso ee playlist SAR ku Lugood. Markaas waafajinta qalab aad la qaadi karo sida iPod.
Wixii qalab kale oo la qaadi karo sida taleefanka Samsung, aad ugu horeeya isla-riixi kartaa heesta dooro Open ee Folder si aad u ogaato meesha music waxaa loo kaydiyaa on your computer. Markaas wareejiyo qalabka la qaadi karo si aad gacanta.
Qeybta 6: dheeraad ah: Top toban playlist Spotify ee xisbiga Christmas + + + tababarka orodka
Ee ah kuwa had iyo jeer u diraynaa ah oo ku saabsan noocyada heesaha ku haboon yihiin fasaxa qaboobaha ah ee aan sameeyay liiska gaaban playlists laga yaabo in ay ka dhergin oo dhan dhadhan ah, ama ugu yaraan badan oo iyaga ka mid ah.
Cristmas-New Years Xaawa
Qadiimiga ah Christmas
2. Xisbiga Playlists
Haddii ay dhaco aad on inuu abaabulo xisbiga ah, iyo hal dhibic taag music dhabta ah oo ahaaday ee jeer oo kale ama kaliya laga yaabaa in aad u isticmaasho qaar ka mid ah content dheeraad ah, waxaan uu la soo ururiyo liiska keegag habboon iyo remixes si ay kaaga caawiyaan in aad hesho tuuro xisbiga la kibirkaaga dhawrsan. Si kastaba ha ahaatee ma ogaan aan deriska waxa dhihi kara.
Generations Mixed Party
Old School xisbiga
R & B xisbiga
Saturday Night House xisbiga
3. tababarka playlist
Riix aad is xadka iyo kordhiyo natiijada tababarka! Lahaanshaha set wanaagsan ee songs in initialize rush adrenaline ah iyada oo aad xididada kaa caawin doonaa helitaanka heerka ku xiga. Duwidda Tani ma aha oo kaliya dhammaystiri doonaa baahida nin ama qof dumar ah oo kaliya doonayaa inaan sii joogo qaab, waxaa kale oo jira compilations u bodybuilders kuwaas oo had iyo jeer ku tumata Xuduudda cusub.
tababarka u Normals
Top leysu ka ahaa tababarka
tababarka! (Marna Stop Mix)
Hip Hop tababarka
tababarka / bamka UP
4. Orodka playlist
Marka aad ka baxsan tahay, ay diiradda saaraan neefsashadaada iyo had iyo jeer isku dayaan in ay jebiyaan diiwaanka shakhsiga ah. Wixii isku biimeynta ah kuwan oo kale ah, waxaan ku soo ururinay liiska wanaagsan music dhiirigalin si aad si aad u fiirsashada iyo la baabi'iyo wax kasta oo Wareersan shisheeye.
Carar Low Tempo <140 BPM
carar High Tempo> 140 BPM
carar dhagixii 170-190 BPM
sare socda heeso.
carar Mix (Marathon Tababarka Mix)
> Resource > Download > In la abuuro, Share and Download Spotify playlist